Amathiphu okunakekela amabele ukuze abukeke kahle
UMLINGISI waseNigeria, uMeg Faridan, ungomunye wabesifazane ohlale echoma ngokuba namabele amahle. Uthi amabele uwanakekela njengobuso bakhe
INTATHELI YESOLEZWE NGOMGQIBELO | February 3, 2020
UKUBUKEKA kwamabele kubantu besifazane ngezinye zezinto ezivamise ukubakhathaza, njengoba abanye baze bakhethe ukukhipha imali bayowalungisa ukuze abukeke eqoqekile futhi eyimbulunga wena owabona ibhola.
Ongoti bathi kubalulekile ukuthi abesifazane bazi ukuthi indlela abukeka ngayo amabele ijwayele ukuhambisana nofuzo kodwa kuyenzeka ube namabele angabukeki ngendlela oyithandayo ngenxa yendlela owaphethe ngayo.
Kuyiqiniso futhi nokuthi ukukhula ngokweminyaka, nakho kunomthelela kwindlela amabele azobukeka ngayo. Nakhona kukhona ongakwenza ukuthi yize iminyaka isihambile kodwa uma uzibuka amabele akho, ukuthokozele okubonayo.
“Lokhu kuhambisana nemisipha yesifuba ebizwa ngokuthi yiCooper’s ligaments, iphakamisa futhi isekele amabele akho.
“Ngokuhamba kwesikhathi, le misipha iyakwazi ukweluleka futhi idale ukuthi amabele ehle.
“Isikhumba esixegayo noma ukulahleka kokuqina kwesikhumba nakho kuyaholela ekutheni amabele abheke ezansi,” kuchaza ungoti.
Uthi kodwa kunezinye izinto abesifazane abazenza ngokunganaki, eziba nomthelela endleleni amabele agcina ebukeka ngayo.
Uma ungumuntu ozivacovocayo, isisindo sakho sehla senyuka. Lokhu kuba nomthelela nasemabeleni akho.
Yingakho kubalulekile ukuthi uma ukade wehlisa isisindo, kube nesisindo ozoma kusona, ungahlukumezi umzimba ngokuthi ulokhu wehla wenyuka.
Kugweme nokuthi uma ukhuluphala, ukhuluphale kakhulu ngokushesha noma uma wehlisa isisindo, sehle ngokushesha.
Lokhu kuyawaphazamisa amabele akho njengoba kuthinta kakhulu imisipha yesikhumba umzimba wonke.
* Umthelela wokubhema:
Ukubhema kwenza ukuthi isikhumba sakho siphelelwe okubizwa nge-elasticity. Kungcono uvele ungabhemi.
* Ukuzivocavoca ngaphandle kokusekela kahle amabele akho:
Uma uzivocavoca, kubalulekile ukuthi amabele akho uwanakele ngobhodisi abadalelwe ukuthi baseke amabele uma wenza lokhu.
Ukuthinteka kabi kwamabele uma unyakazisa umzimba, kwenziwa wukuthi wona agcina egxuma kabi bese eyadonseka, agcine engabukeki ngendlela oyithandayo.
* Zijwayeze umkhuba wokuma kahle:
Uma ulele noma uhleli ngendlela okungeyona, unikeza isisindo ithuba lokudonsa amabele akho.
Kepha ukuma noma ukuhlala endaweni enhle umhlane wakho uqondile namahlombe akho emuva, kungasiza ukusekela amabele futhi kukunikeze nokuphakanyiswa okungokwemvelo.
* Phuza amanzi amaningi:
Buningi ubuhle bokuphuza amanzi ngendlela efanele.
Amanzi enza isikhumba sakhe singashodi ngalutho, kanjalo namabele ayathinteka lapho.
Ukuqina ngendlela kwesikhumba sakho kuzokwenza ukuthi nemithanjana yamabele akho ihlale iphilile okuzokwenza ahlale eqinile angabukeki kabi.
Kukhona nongakwenza ekhaya:
* Xuba amaqanda noCucumber:
Lokhu ukwenza ngokuqhofoza iqanda elilodwa no-cucumber ogayiwe. Ungayifaka iButter cream ukuze wenze kube saphalishi (paste).
Ungakwenza lokhu uma usuyolala, ulale ngomhlane bese ugcoba amabele akho ebheke phezulu.
Ungahlala imizuzu ewu-30, bese ugeza ngamanzi abandayo. Kwenze lokhu kanye ngesonto.
Iqanda linamaProtein nama-vitamin amaningi azokwenza ukuthi inyama yamabele akho iqine, I-cucumber nawo unemisoco egaba ngokuqinisa isikhumba.
Ungenza ingxube yesikhuphasha seqanda, uju neyogathi. Nakho kwenza okufanayo esikhumbeni.
* Sebenzisa i-olive oil njalo uma uyolala:
Ukusebenzisa lolu hlobo lukawoyela kungakusiza ukuqinisa isikhumba samabele akho ahlale ebukeka kahle.
* Ungasebenzisa futhi nama-ayisi:
Lokhu ungakwenza kabili ngesonto. Uma usuyolala uzibhucabhuce nge-ayisi emabeleni ngaphambi kokuthi ulale.